Frankôfônia : hanampy antsika i Korea Atsimo | NewsMada
Frankôfônia : hanampy antsika i Korea Atsimo
“Mangataka hiditra ho mpikambana mpanara-maso eo anivon’ny Frankôfônia i Korea Atsimo amin’izao fotoana izao. Izay ny resaka natao tany. Teo koa ny fanomezan-dry zareo toky ny hanampiana an’i Madagasikara, indrindra ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny amin’ireo fihaonana an-tampony iraisam-pirenena hatao eto.”
Io no tatitry ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, teny Anosy, afakomaly, momba ny fanasan’ny filoha koreanina tatsimo azy tany Korea Atsimo. Namoha ny masoivoho eto amintsika ry zareo. Midika ho fahatokisana an’i Madagasikara izany, zava-dehibe. Eo koa ny fanasan-dry zareo ny minisitry ny Tetibola sy ny fitantanam-bola malagasy, izay mbola misy fihaonana any an-toerana amin’izao fotoana izao.
Nisintonany ny mpandraharaha momba ny fizahantany eto an-toerana ny resaka maro natao tany: misy karazana fitsapan-kevitra amin’ny vahoaka koreanina tatsimo ny amin’izay firenena tian-dry zareo handehanana hanaovana fizahantany, amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavany. Voatonona voalohany amin’izany i Madagasikara. Anjaran’ireo mpandraharaha ny mandamina sy mandrindra izany.
Hahazo tombony koa anefa ireo mpianatra, indrindra ny eo anivon’ny oniversite Accem satria homena fiofanana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena izy ireo, manomboka izao. Anisan’ireo hanaraka akaiky ny lafiny teknkika sy ny fikarakarana rehetra izy ireo. Ohatra, ny lafiny fitandroana ny filaminana ; ny fampitaovana ; ny fampiantranoana ireo vahiny ; ny lafiny arofenitra. Vita sonia omaly tetsy Manakambahiny ny fiaraha-miasa momba izany teo amin’ny ambasadin’i Frantsa sy ny OIF ary koa ity oniversite ity.